SIDA LOO KORO VATOCHNIK: BEERITAANKA IYO DARYEELKA EE BANNAANKA U FURAN - BEEKEEPING
Asclepias, ama, sida loogu yeedho, vatochnik - Tani waa geedo ama geedo dheer ah oo leh dherer ah 0.5 illaa 1.5 m, taas oo loo tixgelinayo goobaha dhalashada Waqooyiga iyo Koonfurta Ameerika. Uterusku wuxuu leeyahay xidid adag oo adag, dhererka toosan.
Caleemaha waaweyn ee lanceolate waxay ku yaalliin meel u dhow ama dhaadheer. Dhererka caleen wuxuu gaari karaa 20 cm, caleemuhu waxay leeyihiin caarad cufan oo dhexda ah, qaybta hoose ee caleen ayaa ah mid si xawli ah u dillaacsan.
Vatochnik Blooms ee qeybtii labaad ee xagaaga oo leh ubax yar yar oo casaan, casaan ama midab cad, kuwaas oo lagu soo ururiyey dallad la mid ah-sida dalladaha. Ka dib markii xagaaga kuleylka ah, miraha shinni-qaabeeya ay ku bislaadaan, daboolay fluff, si aan caadi aheyn oo u eg suuf, taas oo geedka loo siiyay magaca "vatochnik".
Noocyada caleemaha qurxinta dilka ah
Sida geedka ornamental, noocyadan vatochnika waxaa loo isticmaalaa: hilibka-cas, tuberiyo iyo Suuriya. Tixgeli mid kasta oo ka mid ah noocyadaas si faahfaahsan.
Ma taqaanaa? Asklepias waxay leedahay ilaa 80 nooc, laakiin kaliya seddex ayaa loo isticmaalaa ujeedooyin qurxinta.
Hilibka qumbaha waa casaan
Grouper-cas wuxuu ku koraa ilaa 1.2 m oo dheer. Stem jeexjeexay, oo leh caleemo farabadan, caleemo yar yar. Buuryada vatochnika hilibka-casaan waa cufan, waxay leedahay qaab qurux badan, way koraan sanado badan.
Wakhtiga ubaxu waa Julaay, muddada uu soconayo ilaa 35 maalmood. Ubaxyada waa casaan ama casaan-casaan, caddaan yar, oo leh dhadhan yar, dhadhan shukulaato ah. Ubaxyada waxay sameeyaan duufaanka-qaababka dorsada leh ee leh dhexroor 5-6 cm.
Shtochka tuberose, ama tuber-boog - 0.5-0.7 m sare. Si adag, toosin. Oblong ka baxo aaladda. Blooms ubax waaweyn oo ubaxyo ubax yar oo caraf udgoon. Muddada ubaxku waa muddo dheer - laga bilaabo bartamihii xagaaga ilaa dayrta hore. Noocyada qaar ka mid ah vatochnika tuberose waxay leeyihiin ubax jaale ah oo casaan ah.
Dabeecadda Syatoan waxay gaartaa dhererkeedu yahay 0.8-1.5 m, noocyadani waa beerka mudada dheer, waxay kori kartaa ilaa 30 sano. Caleemaha tooska ah, cufan ayaa lagu daboolay caleemo qulqulaya, qiyaastii 14 cm dheer Caleenta caleenta midabka cagaarka cagaaran waxay u egtahay caleemaha rhododendron.
Muujinta noocyada noocan ah waa dayrta caleemaha hoose iyo soo dhaweynta qaybta xididka ee caleemaha. Blooms vikik barafka Suuriya virginik leh dhexdhexaad ah oo ah 8-10 mm, taas oo ka kooban dallad-sida dufanka inflorescences. Xilliga ubaxu wuxuu bilaabmaa July waxaana mararka qaarkood uu socon karaa ilaa uu baraf ugu horeysay. Noocan ah vatochnik ayaa u ogolaanaya caleemaha si fogaan ah oo ka badan 1 m ka soo baadiyaha hooyada.
Ma taqaanaa? Carafta vatochnika waxay u egtahay urta macaan ee macaan.
Duufaantu waa warshad aan qabin, waxay ku koraan ciidda oo dhan, laakiin xitaa jilicsanaanta aaladda ayaa doorbidaya horumarka fiican. Meesha guga ay koraan waa inay noqdaan qoraxdu, iyada oo aan ku dhowayn biyaha dhulka.
Si ay vatochnik u noqoto midab iyo qurux, waxay u baahan tahay inay bixiso meel ku filan oo loogu talagalay horumarinta, marka laga beerto waa lagama maarmaan si loo ilaaliyo masaafada ugu yaraan 2 m ugu yaraan geedka ugu dhow.
Noocyada Suuriya way ka duwan yihiin kuwa kale ee ciidda gardarada ah, sidaas awgeed waxaa lagula talinayaa in lagu beero dheri leh lakab qaro oo dheecaan leh. Awoodda leh vatochnik digs dhulka, sidaas darteed xaddidaya koritaanka hababka.
Waa muhiim! Kobcinta hal meel muddo ka badan 10 sano, baadiyaha baadiyaha u baahan baahida loo qabo tallaal loogu talogalay kobcin wanaagsan.
Vatochnika koraya iyada oo loo marayo geedo
Gowserku wuxuu si guul leh u faafinayaa abuurka. Dhibaatada keliya ee la kulmi karo waa maqnaanshaha miraha on geedka qaangaarka sii kordhaya, tan iyo vatuchnik u baahan tahay xagaaga kulul si ay u daadiyaan.
Si kastaba ha ahaatee, miraha vatochnika badanaa laga heli karaa on sale, iyo waa sahlan tahay in ay koraan geedo ka iyaga; Waxaanu si faahfaahsan u sharaxnaa habkan.
Markaad abuurto abuurka geedo
Wixii faafin ah ee geedo leh abuur, waxaa lagu beeray geedo guriga at March - April. Seeds ayaa weli noolaan kara muddo 3 sano ah. Beeraha geedaha waxaa lagu fuliyaa dhulka, loogu talagalay dhirta gudaha ama dhirta gudaha.
Qoto dheeraynta abuurista waa inay ahaataa qiyaastii 10-15 mm. Lakabka biraha ayaa lagu shubaa sanduuqa seedling, ka dibna loamy ciidda, kuwaas oo jeexjeexyada la sameeyey iyo miraha aan la qoob-ka-abuurin. Qiyaastii laba toddobaad ka dib marka la beero caleemaha ugu horreeya ee fiiqitaanka ayaa soo bixi doona.
Xaaladaha caadiga ah ee geedo
Ka dib beerashada miraha, carrada waa la qoyan yahay, iyo weelka beerto waxa lagu daboolay filim si loo abuuro saameyn aqalka dhirta lagu koriyo. Maalin kasta waxaad u baahan tahay in aad hawo gasho geedo, furista filinka dhowr saacadood.
Ciidda qoyan laba ilaa saddex maalmood, waxaad si joogto ah ugu ridi kartaa biyo kulul. Marka sprouts muuqan, weelka leh geedo waxaa la dhigayaa meel wanaagsan oo iftiin leh heerkulka hawada lahayn oo ka sareeya +18 C Ka dib markii geedo ka xoog badan, filimka laga saaro gebi ahaanba.
Geedo quus ah
Geedo la abuuray waa in lagu dhajiyaa dheriyo kala duwan ama weel weyn oo leh meel bannaan oo loogu talagalay horumarinta wanaagsan ee seedling. Taangiyada cusub waa inay la socdaan lakabka dheecaanka ee 2-3 cm. Dusha sare ee geedo waa la fiiqi karaa, taasoo kicinaysa koritaanka warshadda. Ka dib markii la soo qaado, awoodda leh geedo dhowr maalmood ah ayaa ugu fiican in la yaabay.
Ma taqaanaa? Asklepias waa warshad malab wanaagsan, mid hektar ah oo beerto ah wuxuu bixiyaa qiyaastii 600 kg oo malab fudud leh caraf udgoon.
Vatochka geedo, kuwaas oo laga soo dhalaalay abuur, waxaa lagu beeray karaa dhulka furan at a site loo diyaariyey bilowgii June sida ay nidaamka 0.5 × 0.5 m. Marka ugu horeysa ka dib markii laga beerto, dhirta dhalinyarada u baahan yihiin in la waraabiyo maalin kasta. Ka dib 3-4 sano, geedka waa inuu Bloom.
Hababka kale ee beerto iyo faafinta
Cunnadeynta vatochnika ayaa sidoo kale lagu sameeyey by abuurka abuurka si toos ah dhulka, kala qaybinta baadiyaha iyo gooyn. Beeraley kastaa wuxuu dooranayaa doorashada ugu habboon.
Beerashada si toos ah dhulka ugu fura
U beerashada si toos ah dhulka dhulka guga hore ee carrada qoyan, isla markiiba ka dib soo jeeda barafka. Goobta dhul-beereedka ayaa hore loo qoday qoto dheer, ka saar xididdada haramaha iyo dabacsan.
Taas ka dib, jeexjeexyada ayaa la sameeyey, waxay qoyaan iyo abuurka lagu beeray qoto dheer oo ku saabsan 30 mm.
Markaas abuur ah ayaa lagu rusheeyaa dhulka, halka godadka yar yar ayaa ka tagay dhulka si ay u waraabiyaan toddobaadyada ugu horreeya ka dib markii la beero. Haddii miraha lagu beeray dhul qalalan, waa in la daboolaa sariiraha leh filim si loo dedejiyo muuqaalka sprouts.
Si loo daba galiyo codbixinta, gooynta waa in la sameeyaa bilowga xagaaga si ay u gooyaan dhalinyaro yar yar oo ah ilaa 15 cm qaybo dheer, oo laga yaabo in caleemaha hoose laga saaro, iyo jarida waxaa lagu dhigayaa ciid qoyan. Noocida noocaan ah waxay u baahan tahay waxtarka, tan iyo goynta, taas oo lumisay wax badan oo dheecaan caano ah, waxay ka sii xumaan doontaa inay qaadato xididka. Gooyn waxay xidid kudhacaan ilaa labaatan cisho.
Kala jaridda baadiyaha
Cunnadeynta vatochnika habka qaybinta baadiyaha waxaa lagu fuliyaa dayrta goor dambe, ka dib dhammaadka muddada ubax. Si arrintan loo sameeyo, qodo geed, kala qaybsamaan rhizome googooyo 10-15 cm, u qaybiyaan afkoda dabagalka iyo dhirta qaybaha kala go'ay ee baadiyaha ah meel joogto ah oo sii kordheysa.
Qayb kasta oo ka mid ah rhizome waa inuu leeyahay buro cusub.
Iyada oo habkan loo dhalanayo, dhirta ayaa u muuqata inay xidid tahay, iyo duurka cusubi waxay awoodaan inay ubaxaan xilliga xagaaga soo socda.
Waa muhiim! Casiirka Vatochnika ee taabashada maqaarka wuxuu keenaa cuncun.
Waa maxay dhirta uu vattika ku daro?
Badeecadu si wanaagsan ayey u socotaa ku dhowaad dhammaan dhirta, laakiin isku dhafka ugu wanaagsan waxaa la sameeyaa taajkii cagaarka, perlovnik iyo miscanthus. Qalbadda sare, physostegiya, ekhinatseya iyo aconites si fiican u buuxiyaan duurka xooggan vatochnika qurxinta iyo ku dar midabada dhalaalaya dacha ama beerta.
Sida loo daryeelo furaha furaha dhulka
Kobcinta beerta beerta beerta ee beerta ama dacha ma aha mid si gaar ah u adag, xitaa ninkii beerta nudaha ah ayaa hagaagi kara hannaankan. Ka sokow waraabinta iyo bacarimiso, taas oo aan ku sharxi karno ka dib, vatochnik waa in mararka qaarkood la jarjaro, sameyska geed caleen ah. Haddii aad rabto in aad dib u soo noolaato geedka, waxaad gooyn kartaa dhammaan qaybaha dhulka, iyo ugu dhakhsaha badan caleemaha cusub ayaa kori doona xididka. Waxaa lagu talinayaa in la gooyo caws ubax ka dib marka ubaxu dhammaaday, haddii aadan qorsheynin inaad soo ururiso miraha.
Waa maxay waraabinta biyaha
Ka dib markii la beerto, shoolabku wuxuu u baahan yahay waraabin joogto ah. Warshad qallafsan ayaa leh nidaam xidid awood leh, taas oo awood u leh inay si madax bannaan u siiso dhirta qoyaan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa lagama maarmaan ah in la kormeero xaaladda xaaladda ciidda, xilliga qalalan ee vatochnik waa in la waraabiyaa fiidkii.
Goorta iyo sida loo quudiyo
Xilliga guga, ka dib barafka ka baxaya aagga taas oo seedling sii kordhaya, waxaa lagama maarmaan ah in la nadiifiyo wax ka soo kaas oo geedka daboolay jiilaalka, tani waxay fududeyn doontaa koritaanka caleemaha yar yar.
Ka dib muuqaalka caleemaha cagaaran waxaa la karin karaa Bacriminta macdanta kakan, iyaga oo si toos ah u gelaya ciidda. Waxay kicisaa koritaanka ee afkoda iyo caleemaha, iyo sidoo kale bixiyaan ubaxyada jilicsan ee vatochnika xagaaga.
Waxay u adkaysata cudurada kala duwan iyo cayayaanka, xaalado dhif ah ay baadiyaha u kici kartaa duun yar - whiteflytaas oo ku quudisa casiirkeeda, taas oo keeni karta in la joojiyo. Ka takhaluska cayayaanku wuxuu noqon karaa daroogo "Fufanon" "Rovikurt" ama "Aktelli", oo loo diyaariyey sida ku qoran tilmaamaha.
Dhibaato kale oo laga yaabo inay ka timaado vatochnik inta lagu jiro beerashada iyo daryeelka waa qoyaan hawo aan habooneyn. Iyadoo qoyaan xad dhaaf ah, dhirta ayaa saameeya caaryada, iyo qoyaan la'aan, caleemuhu waxay noqon doonaan huruud waxayna bilaabaan inay dhacaan. Xaaladda kowaad, waxaa lagama maarmaan ah in la yareeyo heerarka qoyaanka, haddii ay tahay dhalmo ama dhir digsi ah, ka dibna weelka leh vatnik waa in loo wareejiyaa meel daloolo ah, kiis labaad, buufinta marxaladaha ayaa caawin doona.
Ma taqaanaa? Fududyo nacas ah oo daboolaya walxaha Asklepias ayaa diida qoyaanka: tan "suufka" ayaa loo isticmaalaa in lagu isticmaalo jaakada nolosha.
Si aad u hesho cayayaanka sii kordhaya ee naqshadeynta muuqaalkaaga si aad ugu guuleysatid iyo xilli-xiga si aad u raalli geliso baadiyaha, waxay u baahan tahay in ay bixiso hoy. Caleemaha qallalan waxay ku habboon yihiin hoy, bannaanka qaar ayaa u isticmaala ujeedadaas mulching leh balka ama jilif la qalajiyey geedaha. Ka hor inta hoyga jiilaalka, waa in la gooyaa caleemaha qalalan heerkul ah 10 cm dhulka, tani waxay hagaajin doontaa muuqaalka qurxinta ee goobtii, iyo gooyaa afkoda ku haboon yahay sida wax lagu daboolayo.